ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း (အစ/အဆုံး)
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်း (အစ/အဆုံး)
Thank you for posting President Obama’s speech at the Yangon University where I was graduated.
I wish our people of Myanmar learn and practice the civilized democracy in short-term rather than the disciplined democracy which could take some time.
အိုဘားမား လာတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု တော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအစိုးရအပါအဝင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်ဆိုး စရိုက်ဆိုးတွေ မပြင်သရွေ့ အိုဘားမားမကလို့ သိကြားမင်းပဲ လာလာ တိုင်းပြည်ကတော့ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အစိုးရရဲ့ ပြည်သူအပေါ် ကလိမ်ကကျစ်ကျချင်တဲ့ အကျင့်၊ အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ အကျင့်၊ မလိမ့်တစ်ပါတ်လုပ်ချင်တဲ့ အကျင့်၊ တိုင်းပြည် ဘဏ္ထာ တွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခိုးတဲ့ အကျင့်၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံခြားသားလက်ထဲ ရောင်းစားချင်တဲ့ အကျင့်၊ ဒါတွေရှိနေသမျှ တိုင်းပြည်လွတ် ဘာမှ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ct ဆိုတဲ့လူက သူ့ အမျိုး ဘင်္ဂလီကို လာပြီး Promotion လာလုပ်နေတယ်။
ct you are v. stupid. may be you are one of military partners.
ct အမည်နဲ့ ကွန်မန်းရေးရေးနေတဲ့ အကောင်က သမ္မတရုံးက မူးဇော်ဆိုတဲ့ နွားနေမှာပေါ့ ။ ဘင်္ဂလီ တွေက ဒီကောင်တွေရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင် မင်းသားတွေဆိုတော့ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂလီမပါရင်စကားမပြော တတ်တော့တာနေမယ်။ အခုအိုဘားမား ဗမာပြည်လာတော့ ဒီကောင်တွေ အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်ရ စားကောင်းခြင်းမစား ရနဲ့ နေလို့ထိုင်လို့အတော်ကိုမရ ဖြစ်နေကျမှာပေါ့လေ။
သူပေးတဲ့ အကူအညီဆိုတာ မင်းတို့စစ်သားတွေအတွက် မဟုတ်ဘူးကွ ct ဆိုတဲ့ အကောင်ရ ။ ပြည်သူတွေအတွက်ပြောတာ မင်းတို့ကို ကျွေးထားမွေးထားတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားတွေကို ပြောတာ။ အကူအညီလဲမရချင်နေပါစေတဲ့ အားမနာ လျှာမကျိုး ကွာ အေးပေါ့ မင်းတို့ကတော့ အကူအညီဘယ်လိုမလဲ ပြည်သူစီက ဓားပြတိုက် ခိုးဝှက်ထားတာတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီပဲ ဥစ္စာ။ီးပဲကွာ ct ဆိုတဲ့ကောင်။
ထူထူအအ.. လူတောမတိုးတာကို အိနြေ္ဒရှိသလိုလို ဟန်ပန်တစ် ခွဲသားနဲ့ လေးပင်နေတဲ့ ခပ်ပျင်းပျင်းတွေနဲ့ အသားကျနေသူတွေအဖို့တော့ သွက်လက်ချက်ချာတဲ့ သူတွေကို ပျာတယ်လို့ မြင်တတ်ပါတယ်။
အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်သေဆုံးနေတာတွေ နေကြတာ အဆုံးသတ်ဖို့ နဲ့ လူသားတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးနှုန်းသွားတာကလွဲလို့ လက်ခံဖို့ မပါဖူးထင်ပါတယ်။
ကို unknown ကိုပြောချင်ပါတယ်။
လူတွေအတွေးအမြင် မတိုးတက်လို့ တိုင်းပြည် မတိုးတက်ဖူးဆိုတာ အကုန်လုံးမမှန်ပါဘူး။ လူတွေ
အသိစိတ်ဓါတ်တွေ မပြည့်ဝလို့ အစိုးရဆိုတာ လိုနေတာပါ။ လူတွေသာ မသတ် မခိုး မလိမ်
လွဲမှားစွာ ကာမပြုကြဘူးဆိုရင် ရဲလဲမလို ရှေ့နေလဲမလို တရားသူကြီးလဲမလို အစိုးရတောင်
မလိုပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ်ကြလို့သာ အစအစ အရာရာလိုနေတာပါ။
အထူးသဖြင့် အစိုးရရဲ့ ပြည်သူအပေါ် ကလိမ်ကကျစ်ကျချင်တဲ့ အကျင့်၊ အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ အကျင့်၊ မလိမ့်တစ်ပါတ်လုပ်ချင်တဲ့ အကျင့်၊ တိုင်းပြည် ဘဏ္ထာ တွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ခိုးတဲ့ အကျင့်၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် တိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံခြားသားလက်ထဲ ရောင်းစားချင်တဲ့ အကျင့်၊တွေက အစိုးရထဲမှာ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒါတွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး
လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဥပဒေနဲ့ ပြုပြင်ယူရတာပါ။